James Swan oo Golaha Ammaanka uga waramay xaaladda dalka | Dhacdo
Home Wararka Maanta James Swan oo Golaha Ammaanka uga waramay xaaladda dalka
James Swan oo Golaha Ammaanka uga waramay xaaladda dalka
Wakiilka Xogahaya Guud ee QM u qaabilsan Soomaaliya James Swan ayaa xubnaha Golaha Amniga ee QM warbixin ka siiyay xaaladda guud ee Soomaaliya ay xilligan ku sugan tahay.
Xubnaha Golaha Ammaanka ayaa muujiyay sida weyn ee ay uga walaacsan yihiin khilaafka joogtada ah ee ka dhex taagan madaxda dowladda Soomaaliya iyo saamaynta ay ku yeellan karto jadwalka doorashada iyo hannaanka doorashada.
Goluhu wuxuu ku booriyay dhammaan dhinacyada in ay is-xakameeyaan, wuxuuna hoosta ka xarriiqay muhiimadda ay leedahay ilaalinta nabadda, amniga iyo xasilloonida Soomaaliya.
Xubnaha Golaha Ammaanku waxa ay ku boorriyeen dhammaan dhinacyada in ay ku xalliyaan khilaafaadkooda wada-hadal dan u ah Soomaaliya iyo in ay mudnaanta koowaad siiyaan si nabadgelyo ah oo ay ku dheehan tahay doorashooyin hufan, lagu kalsoonaan karo oo loo dhan yahay kuna dhacda muddadii lagu heshiiyay si waafaqsan heshiisyadii 17 -kii September iyo 27 -kii May.
Xubnaha Golaha Ammaanka ayaa ku boorriyay Dowladda Federaalka iyo Dawladaha xubnaha ka ah Federaalka in ay hubiyaan in wixii khilaaf siyaasadeed ah aysan ka leexin tallaabooyinka mideysan ee ka dhan ah Al-Shabaab iyo kooxaha kale ee xagjirka ah.
Previous articleGalmudug oo ku baaqday in la joojiyo colaadda Xananbuure
Next articleKorneyl Afcaddey oo loo doortay Senator ka tirsan Aqalka Sare